जनताले तिरेको करको हविगतः कालोपत्र गरेको केहि दिनमै ग्राभेलमा परिणत - सिम्रिक खबर
किन गरियो म्यासेञ्जरको कलर परिर्वतन ? चिनियाँ राष्ट्रपतिले अमेरिकी आक्रामकताविरुद्ध युद्धताकाको भावना राख्न आफ्ना नागरिकलाई आग्रह अफगानिस्तानमा भिसाका लागि आवेदन दिन भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा १५ जनाको ज्यान गयो बजाज डोमिनार २५० को तिहारपछि मात्र बिक्री सुरु हुने स्कल इन्टरनेशनलले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सन् २०२० को प्रेसिडेन्ट अवार्ड प्रदान गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गर्यो कक्षा १२ को परीक्षा तालिका
जनताले तिरेको करको हविगतः कालोपत्र गरेको केहि दिनमै ग्राभेलमा परिणत
रौतहट जिल्लाको मौलापुर देखि सोनरनिया हुँदै बारा जिल्लाको चिउटाहा सम्म निर्मान गरिएको सडक १साल नबित्दै ग्राभेलमा परिवर्तन भएको छ।
पिच फूटेर अहिले आवागमन अबरूध हुने स्थितिमा पुग़ेकोछ । नेपाल सरकारको सड़क डिविज़न चपुरबाट ठेक्का भएको उक्त सड़क प्रदेश-२ सर्लाहीको नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य मा.सुरेन्द्र सिंहका भाई नरेन्द्र सिंहले निर्माण गरेका थिए । मौलापुर भकुवा खोलाको पूल नजिकै कालोपत्र ग्राभेलमा परिवर्तन हुँदा आवत जावतमा कठिनाई भएको छ।उक्त बाटोको ठेक्का लिएको नरेन्द्र सिंहले नराम्रो काम गरेर पैसा निकाशा गरेको र अहिलो उक्त बाटोमा ठुलो दुर्घटना हुने सम्भावना कायम भएको मौलापुर नगरपालिकाको मेयर रिना कुमारी साहले दुखेसो पोखेकी छिन।
त्यस्तै राष्ट्रिय ग्रामीण यतायात सुदृढिकरण कार्यक्रम (SNRTP) बाट औरैया-बंकुल-हिमालिबास सड़कको निर्माण कार्य न सकिदै सोनरनिया-सितलपुर खण्डमा पिच फुटेर करिब करिब आवागमन बन्द भएकोछ । रौतहट जिबिसबाट ठेक्का भई हाल प्रदेश सरकारले हेरीरहेको उक्त सड़क यूनाइटेड बिल्डर्सका सकुन्तलाल हिराचनले निर्माण गरेकाहुन । निर्माणकै क्रममा सड़कको यस्तो हालत हुनु दुर्भाग्य हो ।
यी र यस्ता गुणस्तरहिन काम गर्ने ठेक्केदार र गराउने सरकारी निकायमाथी तुरन्त कार्वाही गर्न मेयर रिना कुमारी साहले माग गरेकी छिन।
ग़लत ठेक्केदार संरक्षण गर्ने पार्टी र नेताहरूलाई पनि समयमा सुध्रिंन समेत आग्रह गरेकि छिन।।
किन गरियो म्यासेञ्जरको कलर परिर्वतन ?
चिनियाँ राष्ट्रपतिले अमेरिकी आक्रामकताविरुद्ध युद्धताकाको भावना राख्न आफ्ना नागरिकलाई आग्रह
अफगानिस्तानमा भिसाका लागि आवेदन दिन भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा १५ जनाको ज्यान गयो